Zimbabwe: Fashioning a Crisis Where None Exists - allAfrica.com
However, the country's opposition parties, in total disregard to the lockdown regulations, that are lawful and therefore legally binding, sought to breach those measures to effect an illegal regime change through demonstrations.
When the Government enforced the regulations, as has been indeed done across the globe with the blessings of the UN, the country's opposition parties, in connivance with some Western embassies and some Zimbabwean fugitives outside the country decided to fashion a humanitarian crisis.
The hard measures taken have taken their toll on the economy, but regardless of the dark shadow cast by the pandemic, there are signs of economic growth, something that has unnerved the country's detractors and their poodles in Zimbabwe who want to see the country in perpetual turmoil and misery.
Despite the Covid-19 pandemic, the EIU also forecast an advancement in Zimbabwe's economic performance anchored on improvements in power generation, agriculture and mining, among other factors.
Contrary to such aspersions, Zimbabwe's democratic tenets are flourishing, political reforms are being entrenched with incongruent laws such as the Public Order and Security Act and the Access to Information and Protection of Privacy Act being struck off.
The Second Republic's democratisation process has indeed given every Zimbabwean a voice including malcontents on social media platforms such as Twitter, who daily spew vitriol in the name of freedom.
These machinations include Western nations, with a former opposition top official recently revealing that the country's opposition parties have been captured by the Central Intelligence Agency (CIA) to generate numerous gigabytes of negative information about Zimbabwe to get money from foreign donors.